Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Ịrụ ọrụ » Gọọmentị German na -enye ego maka nchekwa nchekwa anụ ọhịa na Tanzania
Ndị njem nlegharị anya nke Africa • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ kacha ọhụrụ na Germany • Akụkọ Ọchịchị • investments • News • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Akụkọ na -agbasa na Tanzania • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Onye nnọchi anya German na Tanzania Regine Hess
Gọọmentị German agbatịla nkwado ego na ọrụ aka ya iji kwado anụ ọhịa na nchekwa ihe okike na Tanzania site na njikọ aka abụọ n'etiti steeti ọdịnala abụọ na mmepe mmepe.
Mgbe ọ na -akara afọ iri isii nke nnwere onwe ya, Tanzania na -aga n'ihu na -enweta nkwado ego site na Germany maka ịchekwa ogige anụ ọhịa ndị bụ isi na isi mmalite njem.
Dị ka onye mmekọ na -ahụ maka nchekwa anụ ọhịa, gọọmentị German bịanyere aka na nkwekọrịta inye onyinye ruru nde euro 25 maka ịkwado mmepe na -aga n'ihu nke ọrụ gburugburu ebe obibi echedoro na Tanzania.
Ogige Ntụrụndụ Tanzania kwuru na nkwupụta ya na nso nso a na nkwekọrịta a bịanyere aka na ya ga -ekpuchi ọrụ nchekwa na gburugburu ebe obibi Katavi na Mahale na Southern Highlands na sekit ndị njem ọdịda anyanwụ nke Tanzania.
Ọrụ nchekwa a ga -ekpuchikwa Mmemme Nchekwa Ecosystem Ecosystem Ecosystem (SEDCP II). Ụfọdụ ọrụ a ga -arụ na Serengeti na -eme ka nchekwa akụ na ụba sie ike ebe ahụ.
Gọọmentị German na -agbakwa mbọ ịkwado ogige ọhụrụ ise e guzobere ọhụrụ maka nchekwa nchekwa anụ ọhịa na mmepe njem nlegharị anya na Tanzania na Africa.
N’oge na -adịbeghị anya, isi mmekọrịta dị n’etiti Germany na Tanzania bụ na nchekwa Mahale na Katavi National Parks na okporo ụzọ ha.
Ogige Ntụrụndụ Serengeti na Selous Game Reserve bụ isi ma na -eduga ogige ntụrụndụ anụ ọhịa n'Africa n'okpuru nkwado nchekwa German.
Na 1958 Prọfesọ Grzimek na nwa ya nwoke Michael bidoro ọmụmụ anụ ọhịa mbụ na Serengeti na akwụkwọ akụkọ ha "Serengeti Agaghị Anwụ".
Serengeti bụzi mpaghara ama ama na-echebe anụ ọhịa n'Africa.
Dale N Bickenbach ekwu, sị:
September 20, 2021 na 13: 41
Nkeji edemede dị mma. Mgbe m mere njem nlegharị anya na Serengeti, ahụrụ m onwe m ka m nwee mmasị karịa site n'iwepụta ọkụ anyanwụ na mmeghari ohuru nke ịsụ ụzọ karịa ilele ụmụ anụmanụ ndị ọzọ na -eche maka azụmahịa nke ha. Ebe ọ bụ na ụlọ ọsụ ụzọ na -arụ ọrụ na Deutschland na usoro ịme ngosi ka ọ dịwanye mma na North America, enwere m olileanya na m ga -ewepụrịrị ojiji mmanụ ọkụ na Serengeti, na Tanzania site na ijikọta teknụzụ kachasị mma nke oge a ma na -ejigide gburugburu nke na -emetụta anụ mammals na ndị njem mmadụ. A ga -enwe ekele maka kọntaktị nwere mmasị. Daalụ.